Seera talaali guyyaa wiyxata ogeeyyin fayyaa Siouxland akka iratti mariachuu hedan himan. | KWIT
Oromo News 12.11.2020
Manni fayyaa Siouxland akka gabaaseti seati 24 keessati namni corona virus qabame 88 tauu himan. Woodbury County keessati dhukubichi ammas akkuma babal’ate jira akkasumas namni corona virus qabame 66 qabame hospitaala akka jiranis gabaafame.
Corona virus ammas iowa keessati akkuma dabalaa deemu jira. Akka gabaasa manna fayyaa register Des Moines deparmanti mana fayyaa Himeti Jiraatota iowa harka kuma keessa sababa Covid-19 namni harka tokkoo il akka du’u jiru hime.
Harki 90% ol kan duan martuu nama umriin isaa 60 ol taeedha.
Deparmantiin fayyaa guyyaa namni covid-19 qabame 77 tauu gabaasan waliigalatti namni qabame amoo 2,057 gaheera. Akka state guututi amoo namni qabame 274,000 yoo tau waliigalatti akka state kan duemmoo 3,000 dha.
Duuti gariin ammo sababa dhukuba jalqaba irrati duani seera undergo methodology dhaaf kan jijjiiramedha. Akkasumas, sababa Covid-19 namni duan akka websiten Coronavirus.Iowa.gov akka gudachuu jiran jiru himan.
Sababa Covid-19 jiraattoni Iowa 883 hopitaala galanii jiru. Namoota kanniin irraa harki sadi afaraffaa dhukuba jalqaba irra kan jiraniidha.
Dhukubsatooni hanga zamoona hospitaala hir’atan booda Nebraskaan haara xiqqofudhattee jirti. Dhukubsattooni hospitaala Nebraska keessa jira ammas baaye tau yeroodhaf gad xiqqaate jira.
Ogeessi state akka jedhetti namoona 779 sababa virus eda hospitaala galani jiru, lakkoofsi kunis guyyaa muraasa darbaniif akka homa hin jijjiiramin himan. Garuu ogeessi State dhukubichi akka hin baayanef jiraattini ammas baqqa baayinan namni walitti qabamu balleesu akka qaban himan.
Manni Fayyaa MercyOne Siouxland Medical Center akka gabaasetti kafaltiin hojattoota yoo xiqaate $15 taee jira. Unity Point niis jalqaba torbaan kana kanuma kan walfakkaatu gabaaste jirti.
Jijjiiramni kunis Dec.20 irraa kan jalqabamuudha, akkaata oduun MercyOne irraa nahetti. Hojattooni kafalatiin isaani ol kauun kan arguu danda’anis qarqaarsa naannawa irrati kan godhan, warra nyaata hojattoo fi qarqaarsa biraa kan kenaniidha.
State Iowa sababa Covid-19 warra qabaman osoo hin tain warra duan hordafuu jira, jijjiiramni kunis l
By Fatiya Adam • Dec 8, 2020
State Iowa sababa Covid-19 warra qabaman osoo hin tain warra duan hordafuu jira, jijjiiramni kunis lakkoofsa namoota duan gara harka dhibaan akka state keessa dabaluu malu mullisa.
Iowa yeroo amma qorannoo doctoroota irraa fudhachuu jirani fi nama qabaman dhukubicha qaban osoo hin tain duan corona virus dhaaf kan kennamus.
Jijjiramni kunis dua 433 system keessa hir’isuf 610 ammoo dabalee jira, dua dabalataa 177 yoo tau akka state guututi 2,900 gaheera. Lakkoofsi muraasni kan haqame akka dabalamuu malus himani jiru.